ဟဒီးဆ်: ကောင်းကင်တမန် ဂျိဗ်ရီလ်(အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)သည် ငါကိုယ်တော်အား အိမ်နီးချင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရန် အမြဲမှာကြားတော်မူသည်။ အဘယ်မျှထိဆိုသော် အိမ်နီးချင်းအား အမွေစားအမွေခံအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်မည်ဟုပင် ငါကိုယ်တော် ထင်မိခဲ့သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: ကောင်းကင်တမန် ဂျိဗ်ရီလ်(အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)သည် ငါကိုယ်တော်အား အိမ်နီးချင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရန် အမြဲမှာကြားတော်မူသည်။ အဘယ်မျှထိဆိုသော် အိမ်နီးချင်းအား အမွေစားအမွေခံအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်မည်ဟုပင် ငါကိုယ်တော် ထင်မိခဲ့သည်။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အိမ်နီးချင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပညတ်ချက်များ။ .
အာအိရှဟ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟာ)နှင့် အဗ်ဒုလ္လာဟ်ဗင်န် အုမရ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)တို့က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်ကြားတော်မူသည်။ ကောင်းကင်တမန် ဂျိဗ်ရီလ်(အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)သည် ငါကိုယ်တော်အား အိမ်နီးချင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရန် အမြဲမှာကြားတော်မူသည်။ အဘယ်မျှထိဆိုသော် အိမ်နီးချင်းအား အမွေစားအမွေခံအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်မည်ဟုပင် ငါကိုယ်တော် ထင်မိခဲ့သည်။
ကောင်းကင်တမန် ဂျိဗ်ရီလ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) သည် ငါကိုယ်တော်အား အိမ်နီးချင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလေးထားရန် အမြဲမှာကြားတော်မူရာ နောက်ဆုံးငါကိုယ်တော်သည် အိမ်နီးချင်းတို့အား အမွေစားအမွေခံအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည့် ဝဟီဗျာဒိတ်တော်အား ကောင်းကင်တမန် ဂျိဗ်ရီလ်ယူဆောင်လာမလားဟူ၍ပင် ထင်မိခဲ့သည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် တူရကီ အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ရုရှား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) ဟင်ဒီ ဆင်ဟာလီ ဝီဂါ ကာ့ဒ် ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ်
အိမ်နီးနားချင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝတ္တရားသည်ကြီးမားပြီး ၎င်းဝတ္တရားများကို လေးစားရန် တာဝန်ရှိသည်။
အိမ်နီးချင်းဝတ္တရားနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားမှာတမ်းခြင်းသည် ၎င်းတို့အားဂုဏ် ပေးလေးစားရန်၊ ချစ်ခင်ရန်၊ ကောင်းကျိုးပြုပြီးဆိုးကျိုးကိုဖယ်ရှားပေးရန်၊နာမကျန်းဖြစ်သည့်အခါ သွားရောက်မေးမြန်းရန်၊ ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စများတွင် ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောဆိုရန်နှင့် ဒုက္ခရောက်သည့်အခါ ဖြေသိမ့်ပေးရန် တို့လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အိမ်နီးချင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပညတ်ချက်များ။ .
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +တူရကီ +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ရုရှား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +ဟင်ဒီ +ဆင်ဟာလီ +ဝီဂါ +ကာ့ဒ် +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ်